Vidiyo Hippo: kwalite ọnụego nzaghachi ọrịre na ire vidiyo
Igbe mbata m bụ ọgbaghara, a ga m anabata ya kpamkpam. Enwere m iwu na nchekwa nchekwa smart na-elekwasị anya na ndị ahịa m na ihe ọ bụla ọzọ na-ada n'akụkụ ọ gwụla ma ọ dọtara uche m. Ụfọdụ ebe ịre ahịa pụtara ìhè bụ ozi-e vidiyo ahaziri onwe nke ezigara m. Ịhụ ka mmadụ na-agwa m okwu n'onwe ya, ileba anya n'àgwà ha, na ịkọwapụta ohere maka m ngwa ngwa na-etinye aka ... ma ejiri m n'aka na m na-azaghachi karịa.
Ndị ụlọ ọrụ na-eri mmiri na data na-agbakọ na CRM ha, akpaaka ahịa, ERP, na isi iyi data igwe ojii ndị ọzọ. Mgbe ndị otu ọrụ dị oke mkpa enweghị ike ikwenye na data nke na-anọchi anya eziokwu, arụmọrụ na-egbochi ọrụ na ebumnuche ego na-esiri ike inweta. Syncari chọrọ ime ka ndụ dị mfe maka ndị na-arụ ọrụ n'ahịa ahịa, ahịa ahịa, na ego na-enweta ego na-agbasi mgba ike inweta data iji nweta ebumnuche ha. Syncari na-ewere ọhụụ
Nnukwu Ndepụta Adreesị Email nkwenye, nkwado, na nhicha
Fraịde, Machị 5, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Chili Piper bụ usoro ịhazi usoro akpaaka na-enye gị ohere iru eru ozugbo, ụzọ, yana nzukọ ahịa akwụkwọ na inbound na-eduga oge ha gbanwere na weebụsaịtị gị. Kedu Chili Piper Na-enyere Ndị Ahịa Aka Enweghịzi mgbagwoju anya na-ekesa akwụkwọ mgbasa ozi, enweghị ozi ịntanetị na-aga n'ihu na akwụkwọ ozi iji debe nzukọ, ọ nweghịkwa ohere funahụrụ n'ihi ịgbaso usoro. Chili Piper Atụmatụ Gụnyere Chili Piper na-enye atụmanya gị ka mma ịhazi usoro ihe omume